Mmea ne Mmarima Ntam Nsɛm—Ɛho Afotu
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Sɛ wopɛ sɛ w’aware gyina a, wohwɛ a Bible betumi aboa wo, anaa entumi? Bible yɛ nhoma a akyɛ paa, nanso wode emu nsɛm toto nhwehwɛmu a animdefo ayɛ ho a, wo ho bedwiriw wo.
Mmerante ne mmabaa a wɔadi fi mfe 18 kosi 25 no mu pii susuw sɛ, sɛ ɔbea ne barima a wɔnwaree da a, “ɛnyɛ asɛm biara wɔ India” nnɛ. Nhwehwɛmu a wɔyɛɛ no 2014 na ɛde asɛm yi too gua. Dɔkota bi a ɔwɔ Mumbai de too Hindustan Times nsɛnkyerɛwfo anim sɛ “mmerante ne mmabaa tumi de wɔn ho hyehyɛ wɔn ho, nanso ɛno nkyerɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔware.” Ɔkaa sɛ ɔno deɛ, “sɛ ɔbarima ne ɔbea hyia dakoro anaa wɔtena hɔ sɛ mpenafo a, biribiara nkyekyere wɔn sɛ wɔnware.”
SUSUW HO: Wohwɛ a, bere bɛn paa na nkurɔfo taa nya nna mu yare anaa adwenemhaw? Bere a wɔaware anaa bere a wɔnwaree?—1 Korintofo 6:18.
Nhomanimfo a wɔwɔ Copenhagen Suapɔn mu yɛɛ nhwehwɛmu bi, na ɛbɛtɔɔ gua sɛ sɛ obi ne n’abusuafo taa nya akasakasa a, ɛte ne nkwa so. Wɔde mfe 11 suaa nnipa bɛyɛ 10,000 ho nsɛm, na wohuu sɛ wɔn a wɔne wɔn abusuafo taa nya akasakasa no wu ntɛm sen wɔn a wɔn abusua mu dwo. Awuraa bi a ɔyɛɛ nhwehwɛmu no bi kaa sɛ, sɛ nsɛmnsɛm sɔre na wutumi siesie anaa wutumi dwudwo ano a, “ebetumi aboa ma woanyin akyɛ.”
NEA BIBLE KA: “Nea ɔkora n’ano no wɔ nimdeɛ, na nhumufo honhom dwo.”—Mmebusɛm 17:27.
Animdefo bi de nnipa 564 a wɔaware foforo yɛɛ nhwehwɛmu wɔ Louisiana, na wei buee nneɛma pii ani so. Wohui sɛ sɛ ɔbea ne ɔbarima hyehyɛ aware na egye gu na wɔsan ka bom a, mpɛn pii no, sɛ wɔware a, akyɛ koraa mfe nnum na wɔatetew mu. Aware a ɛte saa mu nnwo; daa na egya da mu.
NEA BIBLE KA: “Nea Onyankopɔn aka abom [wɔ aware mu] no, mma onipa biara nntetew mu.”—Mateo 19:6.
Hu nea Bible ka fa nna a edi aware anim ne nna mu nneyɛe afoforo ho.